Maitiro ekugadzira playlist pane YouTube 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
YouTube hapana mubvunzo iri vhidhiyo-yekugovana portal par kugona. Kubva payakavambwa, mugore rehunyanzvi riri kure 2005, yakashandura nzira yedu yekunzwisisa iyo Internet. Nhasi YouTube yakafanana nemavhidhiyo emarudzi ese: kubva kuongororo, dzidziso, mavhidhiyo emimhanzi, kuburikidza nematrailer emitambo mitsva yemavhidhiyo nemavhidhiyo kuburitswa uye kupera neepodcast. Muchidimbu, paYouTube zviri nyore kuwana mavhidhiyo ezvedu kufarira, kune zvese zvido.
Kuti tivaone zvakanaka, tichaona mune ino chinyorwa, maitiro ekugadzira playlist, iyo sezvaunogona kufungidzira zviri nyore kubva pazita, hapana mumwe kunze kweumwe play play, mune edu mavhidhiyo anozotambwa otomatiki imwe pashure peimwe. Izwi iri ratove rinozivikanwa kune avo vakaita zvinyorwa zvekutamba nenziyo mp3 kana kune avo vane chekuita neSpotify.
Kana iwe wakanyanya kufadzwa nevhidhiyo kubva pane yako yekutamba runyorwa, ini zvakare ndinokurudzira kuti iwe utarise kuchinyorwa chedu icho chatichazotsanangura nzira yekurodha pasi YouTube mavhidhiyo.
Gadzira YouTube playlist kubva paPC yako
Chero zvaunoda, kugadzira YouTube desktop playlist iri nyore kwazvo, ingo tevera matanho akanyorwa pazasi:
enda kunzvimbo yeYouTube kubva paPC kana Mac;
wobva wapinda neakaundi yako yeGoogle;
tsvaga vhidhiyo yaunoda kuwedzera pane yako yekutamba;
pazasi pevhidhiyo, tinya bhatani "Chengetedza";
menyu ichavhura kubva kwaunogona kusarudza kuisa iyo bhaisikopo mune irwo runyorwa rwekutamba "Tarisa gare gare", Kana mune imwe yezvinyorwa zvatogadzirwa;
Mune imwechete menyu, unogona zvakare kugadzira zvinyorwa zvitsva nekungodzvanya "Gadzira rwiyo rutsva";
ichaonekwa pazasi pemimwe minda miviri, iyo "zita"Uye iyo yakatsaurirwa kune zvakavanzika sarudzo kusarudza kubva kune yekutamba ("Privado","Kwete kunyorwa", E"Publish");
panguva ino unogona kudzvanya "Dza“Uye tanga kuwedzera zvikamu mairi.
Kuti uwane, teerera, kana kugadzirisa playlist, ingodzvanya iyo "Kuunganidza". Pane iro peji rinotakura iwe uchawana ese edu playlists, apa ingotinya pane imwe yatinofarira kuti tigone kuigadzirisa. Kune avo vanoshamisika, ndinorangarira kuti kero yeedu playlist iri pamusoro peji browser kero bar kero kero inobatsira zvikuru kukurumidza kugovera playlist.
Uyewo, pane nzira yekukurumidza yekuwedzera mavhidhiyo kune yedu yekutamba kunyangwe zvakananga kubva kune yekutsvaga mhinduro, kana kungozeya pamusoro pevhidhiyo yekufarira, iwe uchaona bhatani rine matatu matatu akaiswa akamira pamberi pezita revhidhiyo. Nekudzvanya pairi negonzo, unogona kusarudza chinhu "Sevha kune yekutamba".
Gadzira runyorwa rwekushandisa muYouTube app kubva kune mafoni uye mahwendefa
Kugadzira playlist pafoni nhare yakafanana zvikuru nekugadzira runyorwa pakombuta yedesktop, unofanirwa:
vhura iyo YouTube application pane chako chishandiso;
kuwana kuri otomatiki, kana uine akawanda maakaundi eGoogle, iko kunyorera kuchakubvunza kuti ndeipi yaunoda kushandisa;
Panguva ino, iwe unofanirwa kuwana iyo vhidhiyo yekufarira kwako. Pazasi pechikamu chekutamba pane "Chengetedza";
kana ukadzvanya wabata bhatani, chiono chakafanana neicho chiri mu screenshot chichaonekwa, kwaunogona kusarudza kuisa clip mune runyorwa rwakagadzirwa kare kana kwaunogona kusarudza kugadzira imwe nyowani;
apa, tapira pamusoro pe "Mutsva wekutamba";
kana uchinge wadzvanywa uchafanirwa kuisa zita reiyo vhidhiyo runyorwa uye zvakavanzika marongero.Privado","Kwete kunyorwa", E"Publish");
Kana tangogadzira yedu yekutamba tichave takagadzirira kuisa ese mavhidhiyo atinoda.
Nzira yekukurumidza yekuwedzera mavhidhiyo kune yedu playlist zvakare zvakananga kubva kune yekutsvaga mhinduro ndere kubaya bhatani nematatu matatu akaiswa akatwasuka padyo nezita revhidhiyo uye sarudza chinhu "Sevha kune yekutamba".
Kuti uwane iyo skrini ine zvinyorwa zvako zvekutamba, pamwe kugadzirisa kana kugovana navo, pazasi peiyo YouTube app, ingo dzvanya bhatani ".Kuunganidza".
Zvirongwa zvekuvanzika: Yakavanzika, isina kunyorwa mi Publish zvakadzama
Ose akasika playlists uye mavhidhiyo anogona kuve nematanho matatu ekuonekwa paYouTube., tinoadzamisa kuitira kuti iwe ugare uchiziva kuti ndeipi yaunofanira kusarudza:
Privado, iyi ndiyo sarudzo yakapusa pane dzose, uko runyorwa ruchazongowanikwa iwe wakagadzira playlist. Iyo yekutamba haizoonekwe mune chero mushandisi yekutsvaga.
Kwete kunyorwa, isarudzo yepakati, umo playlist ichaonekwa chete kune avo vane chinongedzo chayo, saka uchafanirwa kupa chinongedzo cheiyo playlist yawakagadzira kune avo vanofarira.
Paruzhinji, iyi zvakare iri yakapusa sarudzo yekunzwisisa, mune iyo playlist ichave inogoneka nemumwe neumwe mushandisi zvese kuburikidza nekutsvaga uye kuburikidza neakananga chinongedzo.
Passei Direto: mashandisiro ekushandisa online kudzidza kudzidza?
Spotify Webhu: Teerera kumimhanzi mahara uye pasina kushambadzira
Maitiro ekugadzira yako wega avatar paFacebook
Android system WebView: chii icho? Inogona kubviswa here?
Audiobooks: emahara kurodha pasi eitali uye ekunze audiobooks
Maitiro ekutarisa kana Instagram iri pasi kana isingasvikike
Iwo akanakisa maapplication ekuteerera kune audiobooks
Maitiro ekurodha pasi mavhidhiyo uye kuvashandura neYTD Vhidhiyo Downloader
Yakanakisa IPTV Player Yekutarisa IPTV Nyore
Maitiro ekuchinjisa WhatsApp machats kubva Android kuenda kuIOS
Maitiro ekumhanyisa Android: nzira dzinoshanda!
Kudanana paFacebook: kudanana uye vatsva vaunoziva
Sevha murume mudiki ... negonzo!